Fryer tsy misy menaka ▷ Hevitra sy Fryers an'habakabaka tsara indrindra 2022
Fryer afaka solika
Haingana haingana Cecofry Compact
Fryer tsy misy menaka: hevitra ary iza no hividianana
Nohavaozina tamin'ny 03/2021
Te hanatsara ny sakafonao ve ianao nefa tsy miala amin'ny sakafo nendasinao? Safidy tsara ny fantson-drivotra mafana ary vao tonga tany amin'ny tranokala momba azy ireo ianao.
Aza adino ny mpitari-dalana anay miaraka amin'ireo modely tsara indrindra, lazainay aminao ny fomba fiasan'izy ireo, ny hevitr'ireo efa nanandrana azy ireo ary ny toerana hividianana azy ny vidiny tsara indrindra an-tserasera any Espana.
NY TIANA INDRINDRA
Inona no tsara indrindra amin'izao fotoana izao?
Fryers comparative tsy misy menaka
Ahoana no hifidianana azy ary inona no tadiavina?
Ahoana no fiasan'ny Fryer tsy misy menaka?
Vidin'ny Fryers Hot Air
Efa an-taonany maro izy ireo no eny an-tsena, saingy mbola betsaka ny olona misalasala momba ity fitaovana kely ity. Raha eto ianao dia satria liana amin'izy ireo ianao, saingy tsy azonao antoka inona no vokatra omeny ary raha mendrika izany ary mety amin'ny tranonao izy ireo. Tohizo ny famakiana ary fantaro ny fampahalalana feno indrindra ary tsy miangatra
Tianay ny manatsara ary mahafantatra raha nanampy anao izahay, ka izay fanehoan-kevitra dia raisina an-tanan-droa, na dia manakiana aza, omeo iray minitra izahay 🙂
➤ Fampitahana ny Fryers tsara indrindra tsy misy menaka
Ampitahao haingana sy mora hahitana ny fahasamihafana lehibe indrindra ary manapaha hevitra hoe iza mifanaraka kokoa amin'ny filan'ny tranonao.
Naoty ambony indrindra
Actifry 2 amin'ny 1 XL
2 Faritra mahandro sakafo
Fanasan-damba azo antoka
➤ Inona ny Fryer tsy misy menaka tsara indrindra eny an-tsena?
Tsy anjarantsika ny manapa-kevitra hoe iza no tsara indrindra, satria samy manana ny laharam-pahamehana ny mpampiasa tsirairay izay mamaritra ny safidy.
Ny azonay ambara aminao dia ny modely misongadina ambony noho ny ambiny, na noho ny zava-bitany, na noho ny vidiny mora na noho ny fananana sanda tsara indrindra amin'ny vola.
Ho hitantsika aloha ny endri-javatra manan-danja indrindra amin'ireo fitaovana tsara indrindra eny an-tsena ary ambany safidy miaraka amin'ny modely hafa nasongadina.
Ahoana no hifidianantsika azy ireo?
Vidin'ny Philips HD9220 / 20
Fandroana rivotra XL ho an'ny fianakaviana: miaraka amin'ny vilia baolina 6,2 l ary harona lehibe 1,2 kilao ho an'ny ampahany 5 - programa fandrahoan-tsakafo 7 efa napetraka miaraka amin'ny efijery fikasihana
Fomba mahandro sakafo mahasalama: sakafo matsiro sy mahavelona miaraka amin'ny tavy latsaky ny 90% - Endasina, manendasa, manendy, manatsatso ary manafana mihitsy aza miaraka amin'ny mpitarika maneran-tany amin'ny fryers an'habakabaka**
Recipe manokana: Ampidino ny rindranasa NutriU mba hahitanao fomba fiaina ara-pahasalamana mifanaraka amin'ny safidinao - Araho tsikelikely izy ireo
Crispy ivelany, malefaka ao anatiny: Ny teknolojia Rapid Air miaraka amin'ny endrika miavaka miendrika kintana dia mamorona rivotra mafana tsara indrindra ho an'ny sakafo matsiro sy malefaka.
Fanadiovana tsy misy ezaka: Airfryer misy kojakoja azo esorina amin'ny fanasana vilia
✅ Toetra mampiavaka ny Airfryer
Capacity of Literature 6.2
Hery 2000 W
Faritra azo antoka fanasana vilia
Hevitra tsara avy amin'ny mpividy
Marika ekena sy za-draharaha
Na dia misy modely maromaro mivarotra tsara aza, ny iray amin'ireo mpitarika ny varotra amin'ny marika fantatra dia ny Philips HD9280 / 90 avy amin'ny fianakaviana Airfryer.
Ity fitaovana ity, ankoatry ny famaritana mahazatra an'ireo fitaovana ireo, dia manana Rapid Air teknolojia. Teknolojia philips vita patanty natao hahazoana sakafo ho masaka mitovy amin'ny menaka kely dia kely.
Tefal Actifry 2 in 1 prix
Ny fanasan-drivotra mafana 2-in-1 manokana Toerana fandrahoana roa hanomanana sakafo iray indray mandeha; misy takelaka makarakara fanampiny mivantana eo amin'ny vokatra
Ny fikorianan'ny rivotra mafana miaraka amin'ny sandry mpihetsiketsika mihodinkodina Fandrahoana malefaka ny sakafo nendasina miaraka amin'ny fanaraha-maso ny mari-pana mandeha ho azy, dia ahafahana manendasa tsy matavy; Ny mari-pana azo amboarina ho an'ny vokatra mahandro tsara dia 80 hatramin'ny 220 ° C
Fandaharana mandeha ho azy 9 mivantana eo amin'ny efijery miaraka amin'ny tontolon'ny fikasihana lehibe; fiatoana manomboka hatramin'ny 9 ora ary mitazona ny fiasa mafana
Fijanonana ho azy rehefa manokatra ny sarony, ny singa rehetra (ActiFry vilia baolina, makarakara, sarony) dia azo esorina ary azo antoka ny fanasan-damba; fameram-potoana misy feo famantarana
Inona no ao anaty boaty Tefal YV9708 ActiFry Genius XL 2in1, koveta azo esorina sy takelaka makarakara, sarony azo esorina, sotro fandrefesana, boky fampianarana
✅ Tefal Actifry Misongadina
Mahazaka lehibe 1.5 Kg: 4/5 Servings
Hery 1400 W
Faritra mahandro roa
Digital Programmer miaraka amin'ny LCD
4 Menus tsianjery
Azo amboarina mandritra ny 10 taona
Amin'izao fotoana izao ny air fryer miaraka amin'ny faritra fahandro roa best selling dia ny Tefal Actifry 2 in 1. Ny iray amin'ireo toetra miavaka indrindra amin'ity modely ity dia ny fahafahana mahandro sakafo roa miaraka.
Izy io koa dia mampiditra a scoop mihodina manala sakafo ho azy ary misoroka ny tsy maintsy atao amin'ny tanana. Somary lafo ny vidiny, na dia matetika aza dia misy tolotra misy fihenam-bidy tsara.
Cecofry 4D vidiny
Endasina sakafo vaovao misy rafitra mahandro mahandro mahandro avy any ambony, avy any ambany na miaraka avy any ambony sy ambany, manodidina ny sakafo 360º ary mizara ny hafanana mitovy.
Fryer automatique mahandro tsy misy menaka miaraka amin'ny programa 8 efa napetraka mba hahamora ny fampiasana sy ny fahazoana azy: sauté, toast, french fries, lafaoro, manual, endasina, vary ary yaourt. Izy io dia misy angady hanakorontana ho azy izay ahafahanao mahandro amin'ny ezaka kely sy ny tahony, samy azo esorina.
Ny mari-pana azo amboarina amin'ny mari-pahaizana avy amin'ny 100 ka hatramin'ny 240º miaraka amin'ny fameram-potoana izay miasa mandritra ny 5 ka hatramin'ny 90 minitra mba hahandro sakafo rehetra azo atao. Anisan'izany ny sakafo mahandro yaourt amin'ny mari-pana 60ºC, azo amboarina manomboka amin'ny 0 minitra ka hatramin'ny 16 ora.
Manana safidy ny mahandro sakafo roa miaraka amin'ny ambaratonga roa noho ny grid, afaka manambatra fanomanana maromaro miaraka amin'ny fotoana iray, manararaotra ny fotoana. Manana vilia baolina 3 litatra izy io miaraka amin'ny coating seramika vato telo sosona izay mahandro hatramin'ny 3,5 kg. ny ovy, manakana ny sakafo tsy hiraikitra amin'ny farany ambany.
Ahitana boky torolalana sy boky momba ny fomba fahandro ahafahana mahandro sakafo isan-karazany amin'ny fomba mora miaraka amin'ny fomba fahandro 40 hianarana ny fomba fahandro miaraka amin'ity fitaovana revolisionera ity ary horonan-tsary fanampiny 8 hijerena amin'ny endrika video hoe tsotra ny mahandro miaraka amin'ity sakafo ity. modely fryer. Manana hery 1350 W izy mba hahandro sakafo amin'ny fomba mahomby. Ny refin'ny endasina dia: 31 x 39 x (47 sm miaraka amin'ny tahony) x 23 sm.
Cecotec Store Jereo ny fifanarahana
✅ Cecofry 4D misongadina
Hery 1350 W
Zone hafanana tsy miankina roa
Kitchen amin'ny ambaratonga 2
Angady Rotary azo esorina
8 Fandaharana preset
Ny marika Espaniola Cecotec dia mivarotra ny fryer mafana feno sy maro samihafa eny an-tsena Mandrak'izao. Ny fahaizany mahandro sakafo roa miaraka, ny angady rotary anao azo esorina hanakorontana sakafo sy ny feno fanaraha-maso nomerika.
Saingy tsy izay ihany, ny Turbo Cecofry 4D dia iray ihany manana roa emitters hafanana, ny iray ambany sy ny ambony iray, izay mahaleo tena ary azo ahetsiketsika miaraka na misaraka.
▷ Princess tsy misy menaka
Vidin'ny Aerofryer XL
✅ Aerofryer Misongadina
Mahazaka 3.2 Liter: 4/5 Servings
Fanaraha-maso nomerika miaraka amin'ny programa isan-karazany
Raha mitady modely amin'ny sandam-bola tsara tokony handinika an'io fryer mahasalama io ianao. Manodidina ny 125 euros ny vidin'ny varotra mahazatra azy saingy matetika misy fihenam-bidy izany hoe manodidina ny 90 euros. Misy dikan-teny roa amin'ny fitaovana misy fahasamihafana kely izay hitanao amin'ny fanadihadiana nataontsika tao amin'ny tranonkala.
Izy io dia fitaovana manana fepetra ankapobeny tsara izay dia nahazo fanekena lehibe eo amin'ny mpividy, izay manome tombana tsara ihany koa. Ny fahafahany ambony amin'ny salan'isa, ny heriny ary ny azy fanaraha-maso nomerika miaraka amin'ny programa isan-karazany.
Raha misafidy izany ianao dia tsy mila manahy momba ny fanadiovana, satria mety amin'ny fanasana amin'ny fanasan-damba izy io. Araka ny hitanao dia tsy misy na inona na inona izy io, ary miaraka amin'ny hevitra tsaran'ny mpampiasa dia mahatonga azy io hijoro amin'ireo modely manana vidiny tsara indrindra.
Vidin'ny Fry Delight
Endasina an-dakozia ara-pahasalamana miaraka amin'ny fomba fahandro 4: endasina, giro, natsatsika, nendasina ary gratin; mampihena ny tavy sy ny menaka amin'ny sakafonao
Mahazaka 800 gr mety ho an'ny olona 3 na 4 ka hatramin'ny 500 g ny frites mangatsiaka atao ao anatin'ny 15 min amin'ny 200 C ao anatin'izany ny fotoana fanafanana mialoha.
Mora ampiasaina 30 min adjustable timer
Endasina ara-pahasalamana mampiasa menaka kely na tsy misy menaka rehefa endasina dia mahandro sakafo mahasalama sy matsiro ianao
Ankafizo ny sakafo nendasinao mahasalama nefa tsy mameno fofona ny trano
✅ Endri-javatra miavaka Fry Delight
Mahazaka 800 Grs: 2/3 Servings
Vokatra azo amboarina 10 taona
Ity fryer mahasalama ity dia iray amin'ireo modely misy anisan'ny sanda tsara indrindra amin'ny vola. Ny pvp-ny dia manakaiky ny 150 euros fa ny mahazatra indrindra dia ny manana fihenam-bidy be ary manodidina ny 100 euro.
Izy io dia fitaovana voalanjalanja miaraka amin'ny fepetra voafaritra tsara mba hanatanterahana tsara ny asany sy hanatrarana ny fahafaham-po ny mpividy anao. Ny tena mahavariana dia ny azy mora ampiasaina, ny drafitrao sy ny inona natao haharitra ary azo amboarina raha sendra simba.
Vidin'ny Fryer CompactRapid
Endasina amin'ny sakafo mahandro sakafo miaraka amin'ny menaka iray sotrokely, hahazoana vokatra ara-pahasalamana. Vokatra miavaka amin'ny fomba fanamboarana rehetra noho ny teknolojia rivotra mafana PerfectCook.
Ahitana harona. Mahandro ovy hatramin'ny 400 grama indray mandeha. Programmable amin'ny fotoana sy ny mari-pana.
Izy io dia manana thermostat hatramin'ny 200 ºC. Adjustable fotoana 0 ka hatramin'ny 30 minitra.
1,5 litatra kaontenera.
Ahitana boky mahandro sakafo feno.
✅ Misongadina haingana haingana
1.5 litatra: 2 servings max
Hery 900 W
Analog thermostat sy timer
Angamba amin'ny aliexpress dia hahita mora kokoa ianao, fa raha tianao mandany vola kely Amin'ny Air Fryer dia manoro hevitra ny Cecofry Compact Rapid avy amin'i Cecotec. Azo antoka fa tsy hamonjy bebe kokoa amin'ny alalan'ny fisafidianana ny china sy amin'ity modely ny Orinasa Espaniola manana antoka roa taona ianao.
Na dia manambara RRP eo amin'ny 75 euros eo ho eo aza ny marika, dia matetika misy fihenam-bidy izay mametraka azy manodidina ny 40 euro. Amin'ity vidiny ity dia tsy misy fialan-tsiny raha te hahandro saika tsy misy menaka ianao ary manandrana teknolojia rivotra mafana.
▷ Inona avy ireo marika tsara indrindra?
Amin'izao fotoana izao dia ireto ireo marika efatra tsara indrindra ao amin'ny Fryers miaraka amin'ny menaka kely ho an'ny katalaogy midadasika sy ny fananana ny modely lafo indrindra tany Espana.
Raha te hahita ny fitaovany tsara indrindra sy ny zava-nisongadina amin'ny orinasa tsirairay ianao tsindrio eo amin'ny sary.
Fryers tsy misy menaka Philips Airfryer
Fryers tsy misy menaka Tefal
➤ Fryers an'habakabaka mafana hafa
Midira amin'ny hevitray, ao amin'izy ireo dia mandinika modely hafa amin'ny antsipiriany hita ao amin'ny tsena Espaniola.
Ho hitanao ny tombony sy lesoka, ny hevitry ny mpampiasa izay efa nahandro niaraka tamin'izy ireo sy aiza no azonao mividy anao amin'ny vidiny tsara indrindra.
Fryer tsy misy menaka Vpcok
Moulinex Easy Fry Deluxe EZ401D Fryers tsy misy menaka
Fryer tsy misy menaka Lidl
Fryers tsy misy menaka Cosori
Fryer tsy misy menaka Aicok
Inona no atao hoe fryer tsy misy menaka
Lasa iray amin'ireo fitaovana an-trano mahomby izy io. SATRIA Afaka manomana karazan-tsakafo rehetra izy ireo, na ny sakafo voalohany na faharoa ary ny tsindrin-tsakafo, fa tsy misy menaka na miaraka amin'ny sotro kely fotsiny. çIzany dia noho ny fisian'izy ireo miaraka amin'ny teknolojia vaovao nampidirina, izay mifototra amin'ny hoe ny rivotra mivezivezy amin'ny hafanana ambony sy amin'ny hafainganam-pandeha ambony. Izany no mahatonga ny sakafo ho tonga lafatra fantatray, nefa tsy mila ampiana menaka be loatra.
➤ Fryer tsy misy menaka hovidiana?
Fryer COSORI tsy misy...
Ny soso-kevitray dia ny hividy marika izay manolotra serivisy ara-teknika any Espaina, toa an'i Tefal, Philips, Princess, Cecotec ... Ataovy ao an-tsaina fa ireo fitaovana mihidy sy malefaka dia iharan'ny hafanana avo ary mijaly be, ka hankasitraka ny toerana misy anao. hanamboarana azy na aiza no hividianana kojakoja raha ilaina izany. Miaraka amin'ny boom, marika fotsy maro no nivoaka izay tsy manana SAT ary tsy dia be loatra ny fahasamihafan'ny vidiny amin'ny marika sasany.
▷ Iza no hofidiana? Lafiny manan-danja
Ny antony lehibe indrindra Ny zavatra tokony hotadidina rehefa mifidy fryer dia:
Ny modely kely dia amidy, mety tsara ho an'ny mpivady na tokan-tena, ary modely lehibe kokoa ho an'ny fianakaviana manontolo, ka tokony horaisinao izany ary fidio ny fahaiza-manao mifanaraka amin'ny filanao.
Tsara kokoa ny mividy endasina matanjaka alohan'ny hahalavoana, satria zavatra mety hitondra fiovana izany kalitao sy fotoana mahandro sakafo. Na izany na tsy izany, ny hery ambony kokoa dia tsy famantarana fa mahomby kokoa izany, satria miankina amin'ny fomba ampiasain'ny fitaovana io hery io.
✅ Fanadiovana mora
Ataovy mora ny manasa Zava-dehibe kokoa noho izay heverinao amin'ny voalohany izany, raha sarotra sy sarotra ny fanadiovana dia mety tsy hampiasa azy io ianao mba hisorohana ny fandotoana.
Ny vidiny dia matetika antony tokony hodinihina amin'ny fividianana rehetra, soa ihany fa manana ny vidiny rehetra ianao, na dia amin'ny marika tsara indrindra aza.
✅ Hevitra ny mpividy
Ny fomba tsara hanamarihana ny fividiananao dia ny famakiana ny hevitry ny mpividy efa nanandrana azy ireo. Andramo ny mamaky ny hevitra sy aza mijery ny isa fotsiny, mirona amin'ny taratry ny zava-misy tsara kokoa.
✅ Endri-javatra manan-danja hafa
Na dia ireo lafin-javatra voalaza etsy ambony ireo aza no fototra manan-danja indrindra, dia misy endri-javatra maromaro afaka manatsara be traikefa amin'ny mpampiasa sy ny vokatra nahandro.
Ambaratonga mahandro isan-karazany
Scoop mihodina ho fanalana sakafo
Faritra hafanana isan-karazany
Ny tombony amin'ny fryer tsy misy menaka
Raha efa voalazantsika fa hevitra mahomby kokoa izy io, dia izao no tokony ho fantatsika hoe inona no tombony lehibe indrindra ananany, izay haharesy antsika amin'ny farany:
Sakafo mahasalama kokoa: Marina fa indraindray, noho ny hafainganan'ny fiainana ananantsika, dia tsy mitsahatra mihinana sakafo voalanjalanja isika. Izany dia mahatonga antsika hisakafo haingana sy ratsy, ka maka ampahany betsaka amin'ny tavy ho an'ny vatantsika, izay hovana ho kaloria. Noho izany, ny fryer tsy misy menaka dia hahazo sakafo ara-pahasalamana, mampihena ireo tavy ireo mihoatra ny 80%.
Izany dia hamonjy anao fotoana ao an-dakozia: Isan'ny fitaovana haingana indrindra ny fanendasa. Izany hoe ao anatin'ny minitra vitsy dia hanana lovia vonona sy matsiro isika. Noho izany dia hisoroka ny tsy maintsy mandany fotoana be ao an-dakozia na mifehy ny fotoana. Koa satria amin'ity tranga ity, dia afaka manao ny ilaina fandaharana arakaraka ny sakafo sy ny fotoana mahandro sakafo.
Vitsy ny fandaniana angovo: Iray amin'ireo fitaovana tsy hampiasa hazavana firy izy io. Ka amin'ity tranga ity dia azo ampitahaina amin'ny lafaoro.
Ampidiro ny fameram-potoana: Aza manahy momba ny sakafo, satria amin'ny fameram-potoana dia hampahafantarina anao rehefa vonona. Tsy tokony hanahy momba ny mari-pana ianao satria matetika izy ireo dia manana regulator mari-pana.
Tena mora ampiasaina izy ireo: Marina fa isaky ny mividy fitaovana isika dia matahotra sao ho sarotra amintsika ny hampiasa azy, saingy tsy izany no izy. Manana fanaraha-maso nomerika izy ireo mba hanaovana ny fandrindrana marina.
Mora diovina: Satria fitaovana ampiasaintsika matetika izy io, mila mora diovina ary tena izy. Ny tapany dia azo esorina sy sasana amin'ny fanasan-damba. Na dia tianao amin'ny tanana aza izany, dia ataovy amin'ny savony sy sponjy malefaka.
Manaova veloma ny fofona ratsy rehefa mahandro: Tombontsoa lehibe iray hafa dia ny tsy hisian'ny fofona ratsy mandritra ny ora maro ao an-dakozia na setroka izay mety hiseho miaraka amin'ireo fitaovana hafa.
Iza no tsara kokoa, endasina tsy misy menaka sa misy menaka?
Marina fa betsaka ny fisalasalana, fa hofoanantsika haingana. Satria amin'ny ankapobeny dia zatra na zatra ny fryer misy menaka. Saingy ao anatin'izy ireo dia misy ny fandaniana amin'ny menaka voalaza etsy ambony ankoatra ny hoe handany kaloria bebe kokoa isika ary tsy zavatra hisaorana antsika ny fahasalamantsika. Noho izany antony izany dia mahasalama kokoa ny fry tsy misy menaka ary mamela antsika hamorona sakafo tsy misy farany.
Noho izany, amin'ny tombontsoa rehetra ananany dia hitoetra amin'izy ireo foana izahay, fa eny, na dia tonga lafatra aza ny vokatra dia marina izany. ny sasany amin'izy ireo dia tsy mahazo an'io fangaro io toy ny menaka. Iza no tianao?
Inona no azon'ny fryer lalina raha tsy misy menaka
Fry: Endasina amin'ny lozisialy no resahina, manantena izahay fa mahandro endasina. Eny ary, amin'ity tranga ity dia tsy ho tavela izy. Afaka mankafy frites frantsay ianao, ary koa sakafo voatoto toy ny croquettes na steaks. Fa ny atody nendasina koa dia manana toerana eo amin`ny sakafo ny lalina fryer tsy misy menaka. Ny vokatra dia mihoatra noho ny mahagaga ary ho tianao izany.
Toast: Tsy isalasalana fa ny fahataperan'ny sakafo tsirairay dia hilaza zavatra betsaka momba ny tsirony ary hanaraka tanteraka ny tsironay izahay. Noho izany, raha tianao ny iray mahatonga ny sakafo ho matsatso kely ety ivelany fa miaraka amin'ny atiny be ranony sy malama, dia azonao atao ihany koa ny miloka amin'ity fiasa ity amin'ny fryer tsy misy menaka. Ohatra, ny hena, ohatra, dia iray amin'ireo akora hisaotra anao indrindra.
koa manendasa: Imbetsaka isika no mahita hoe ahoana ny endasina tsy misy menaka dia ampitahaina kely amin'ny lafaoro. Izany dia satria ny rivotra ihany koa no mihodina amin'ny hafainganam-pandeha mafy mba hamenoana ny sakafo. Noho izany dia iray amin'ireo fomba fandrahoan-tsakafo malaza indrindra. Saingy tsy ho an'ny sakafo lehibe sasany, fa koa amin'ny fanaovana tsindrin-tsakafo.
Mitovy amin'ny: Efa misy ny hatsatsika tonga lafatra raha ny endasina tsy misy menaka no resahina. Raha mieritreritra ianao manomana andian-tsakafo amin'ny endrika grill na barbecue, dia tsy maintsy mampiasa ity fiasa ity ianao. Satria mahagaga ihany koa ny vokany. Na dia tsy mivelona amin’ny hena ihany aza ny sakafo voalohany, fa afaka misafidy trondro na ovy mihitsy aza ianao.
Cocer: Efa voalazanay fa tsy mila menaka ary rehefa mahandro sakafo dia tsy ilaina koa. Iray amin'ireo fomba fandrahoan-tsakafo malaza indrindra izy io. Satria momba ny safidy ara-pahasalamana tanteraka ary izany no tiantsika. Ankoatra izany, dia tonga lafatra ny mikarakara ny tenantsika na manao fanomanana tany am-boalohany. Ny zavatra rehetra azonao eritreretina!
➤ Hevitry ny mpampiasa momba ny Air Fryers
Azo antoka fa te hahalala izay lazain'ny mpampiasa fryer mafana ianao. Ny ankamaroan'ny hevitra dia tsara, na dia misy koa aza ireo tsy resy lahatra.
Ireo mpampiasa izay tsy afa-po amin'ny ankamaroany dia mitaraina fa rehefa endasina amin'ny menaka kely dia tsy mitovy amin'ny sakafo nendasina mahazatra ny sakafo. Lojika izany, saingy tokony hotadidinao.
Azonao atao ny mamaky ny sasany amin'ireo fanehoan-kevitra avy amin'ireo mpividy voamarina fa faly, na ny fitsapana nataonao ny foodie:
“Tiako ny manasivana ny menaka ary mitahiry azy tsy misy rivotra mandra-pahatongan'ny manaraka. Ny hafanana dia miseho malefaka sy haingana. Efa nanandrana recette isan-karazany aho ary tsara foana ny vokany. Mangatsiaka sy mivolontsôkôlà tsara daholo ny zava-drehetra ary toa tsy tafahoatra ny menaka ampiasaina. "
“Mbola tsy nanana milina fanasan-damba mihitsy aho taloha ary tena nisalasala ny amin'ny mety ho fiasan'izy io, na ny fahalotoan'izany. Tsara ity zavatra ity! Efa nanao elatra aho tamin'izany. Ny ampahany tsara indrindra dia ny fomba mora ny mitahiry sy mampiasa indray ny menaka. Ny rafitra dia tsy misy loto tanteraka. Tena mora ny fanadiovana satria mora esorina sy sasana ny harona, ny koveta ary ny tampony.
“Ity fryer ity dia hamaha ny olana rehetra anananao amin'ny endasina. Halan'ny endasina noho ny fofona sy ny loto. Mora diovina toy ny fampiasana azy io “deep fryer” io ary apetraka ao anaty savony. Ny hany ampahany tsy afaka miditra amin'ny fanasan-damba dia ny ampahany amin'ny heater, izay mora diovina ao anaty lakandrano. Ny filtration menaka dia miasa tsara ary tsy mamorona loto, nendasina sakafo mangatsiaka mivantana avy amin'ny frizidera, ovy, akoho, sns "
"Tena tsara! Mitaky traikefa kely ny fametrahana ny fotoana hanendasany tsara.
Tsy mandeha tanteraka raha tsy misy menaka, fa tsara kokoa noho ny frizera efa ela velona.
Enga anie mba hisy safidy maro hafa hametrahana mari-pana samihafa. Mety ho tsara kokoa ny nomerika, fa fanomezana tsy nampoizina avy amin'ny sipako izany, ka tsy afaka mitaraina aho. "
▷ Fehiny Mifreidorasinaoite
Araka ny hevitray dia safidy tsara ho an'ireo izay te mampihena ny menaka amin'ny sakafonao tsy mahafoy ny "nendasina" tanteraka. Mety ho fitaovana an-trano tsara ihany koa ho an'ireo izay tia mahandro ao anaty lafaoro, fa miaraka amin'ny tombony fa mahazo aina kokoa sy mora diovina.
Raha mividy izany ianao mieritreritra fa ho endasina mitovy amin'ny modely mahazatra handiso fanantenana anao izanyRaha tsy izany dia ho faly amin'ny fividianana ianao, toy ny ankamaroan'ny mpampiasa.
Raha tsy resy lahatra amin'ny vokatry ny fandrahoan-tsakafo amin'ny rivotra mafana ianao ary mazàna endasina be dia jereo ny Fryer rano Movilfrit.
➤ Vidin'ny Fryers tsy misy menaka
Fryer COSORI tsy misy... Jereo ny fiasa 79.856 hevitra Jereo ny fifanarahana
Fry tsy misy menaka 4,5L... Jereo ny fiasa 158 hevitra Jereo ny fifanarahana
Aigostar Cube - Fryer... Jereo ny fiasa 2.580 hevitra Jereo ny fifanarahana
Cecotec Fryer tsy misy ... Jereo ny fiasa 262 hevitra Jereo ny fifanarahana
Fryer COSORI tsy misy... Jereo ny fiasa 11.129 hevitra Jereo ny fifanarahana
Fryer COSORI tsy misy... Jereo ny fiasa 14.504 hevitra Jereo ny fifanarahana
Ny tsara indrindra	Fryer COSORI tsy misy...
Kalitaon'ny vidiny	Fry tsy misy menaka 4,5L...
Ny ankafizinay	Aigostar Cube - Fryer...
Cecotec Fryer tsy misy ...
Ny vidin'ny Fryers an'habakabaka ambany menaka dia amin'ny ankapobeny ambony noho ny mahazatra. Na izany aza, tsara ny karazana vidiny, ary afaka mahita modely mora vidy manodidina ny 50 euros, na dia ny fitaovana be indrindra aza izay manodidina ny 250 euros.
Na dia avo aza ny RRP amin'ny modely sasany, mandritra ny taona dia misy tolotra vitsivitsy miaraka amin'ny fihenam-bidy tsara amin'ny marika rehetra. Afaka mahita ny tolotra tsara indrindra ianao amin'izao fotoana izao amin'ny fipihana ny bokotra.
Fryers tsy misy menaka
▷ Inona avy ireo mpivarotra tsara indrindra?
Ny lisitra dia havaozina ho azy isaky ny 24 ora miaraka amin'ireo mpivarotra espaniola amazon
Varotra ambony indrindra
Fry tsy misy menaka 4,5L...
Miaraka amin'ny fihenam-bidyVarotra ambony indrindra
▷ Aiza no azonao ividianana ny fryer?
Azonao atao ny mividy ny fryer salama ao amin'ny magazay ara-batana na amin'ny fivarotana an-tserasera, izay hahitanao karazana maro kokoa. Mazava ho azy fa tsy hahita afa-tsy silvercrest ianao ao amin'ny lidl, ary tsy misy foana izany.
Ho an'ny fividianana an-tserasera dia manoro hevitra mazava tsara ny Amazon izahay, izay nahazo ny fitokisantsika sy ny an'ny mpanjifa maro tato anatin'ny taona vitsivitsy. Azo antoka fa fantatrao ilay goavambe e-varotra, fa raha tsy izany dia holazainay aminao ny antony mahatonga azy ho iray amin'ireo safidy tsara indrindra:
Maro karazana marika sy modely
Vidy tsara sy tolotra tsy tapaka
Fandefasana haingana sy mora
Warranty ara-dalàna roa taona
Hevitry ny mpividy hafa
Saingy misy toerana bebe kokoa hividianana fryer tsy misy menaka mora:
Amazon: Araka ny fantatsika tsara, ny goavan'ny varotra an-tserasera dia manana karazan-tsakafo tsy misy menaka rehetra. Noho izany dia afaka mahita modely isan-karazany, toetra ary izay ilainao isan'andro. Noho izany, eo amin'ny isan-karazany be dia be, dia marina fa ny vidiny dia mety miovaova ihany koa, mamonjy anao tsara pinch amin'ny fividianana.
Fitsarana anglisy: Ireo marika lehibe koa dia mihaona ao amin'ny El Corte Inglés. Noho izany dia hahita ny modely fototra indrindra isika, fa koa ny mpivarotra tsara indrindra indraindray amin'ny resaka habe na vaovao. Raha ny vidiny, dia afaka mahazo fihenam-bidy noho ny hafa, arakaraka ny modely.
Lidl: Ny Lidl supermarket Mahagaga antsika isaky ny dingana izany. Satria ny fitaovana toy izany koa dia miseho ao amin'ny katalaogin'izy ireo indraindray. Manana ny zavatra rehetra ilaintsika ny fanapotehana rivotra izay mampanakaiky antsika. Tena mora sy mora ampiasaina. Saingy tsy ny maodely irery ihany fa nanolotra modely hafa koa izy, miaraka amin'ny safidy 9 amin'ny 1. Safidy roa tonga lafatra ahafahana manitsy azy ireo amin'ny filantsika.
Carrefour: Amin'ity tranga ity, ny safidy tsara indrindra dia ireo izay ho hitanao. Ny fryer tsy misy menaka dia iray amin'ireo fitaovana lafo indrindra amin'ny tranokalany ary ankoatra izany, afaka mankafy fihenam-bidy amin'ny marika fanta-daza ihany koa ianao. Avy amin'ny modely compact mankany amin'ny hafa misy sakany ho an'ny lafaoro. Ny vidiny dia hiovaova amin'ireo rehetra ireo fa mbola hahita safidy mora foana ianao.
Cecotec: Nitombo tsikelikely ny marika Cecotec. Nisy niche natao ho anisan'ny nangatahana indrindra, noho ny vokatra azony dia manana ny teknolojia mahomby indrindra izy ireo. Noho izany, amin'ny resaka fryer tsy misy menaka dia tsy ho tavela izy ireo. Midira fotsiny ao amin'ny tranokalany ianao dia afaka mahita izay rehetra atolony anao, amin`ny malalaka fifantenana ny vokatra fa tsy ho an-dakoziaa, fa ho an'ny trano amin'ny ankapobeny ary na dia ho an'ny fikarakaranao manokana aza. Saingy mbola misy bebe kokoa, satria izy io koa dia manolotra anao karazan-tsakafo. Inona koa no azo angatahina?
mediamarkt: Mediamarkt dia manolotra anao modely tena azo ampiharina ihany koa. Ambonin'ny zava-drehetra, mifototra amin'ny marika fanta-daza ary manana a sandam-bola tsara. Azonao atao ny misafidy modely fototra kokoa na iray manana ny fiasan'ny lafaoro. Samy manatsara ny sakafo mahasalama anao ary manampy anao isan'andro.
Kitiho raha hanombana ity fidirana ity!
(Vato: 7 Salanisa: 3.3)
Mitady fryer tsy misy menaka mora vidy? Lazao anay ny vola tianao holaniana
ary asehoy anao ny safidy tsara indrindra
* Afindrano ny slider hanovana ny vidiny
⭐ Fry tsy misy menaka
81 fanehoan-kevitra momba ny «Fryer tsy misy menaka: hevitra ary iza no hividianana»
19 / 08 / 2019 amin'ny 01: 49
Misy olana ny vilaniko rehefa lasa ny iray minitra dia manome ahy E1 ny dikan'izany
21 / 08 / 2019 amin'ny 08: 51
Salama. Miala tsiny aho milaza aminao fa tsy azo atao ny tsy mahafantatra ny modely. Matetika ny E1 dia midika hoe fahadisoana iray ary voalaza ao amin'ny boky ao amin'ny fizarana fahadisoana matetika. Vintana
09 / 07 / 2020 amin'ny 17: 02
Tiako ny french fries, Bacon, akoho sy ny legioma toasted, fa noho ny antony ara-pahasalamana, misoroka menaka be dia be, ary noho izany, ny safidy ny fryer tsy misy menaka, mahasoa, azo ampiharina sy isan'andro safidy ny mahandro sakafo ao an-trano.
Ankoatra izany, mora ny manadio sy mamonjy fotoana, mahandro ny Mazava ho azy fa ny voalohany ao amin`ny vitro sy ny faharoa Mazava ho azy fa amin`ny rivotra fryer.
Inona no toa tsara? Eny, fantatrao tsara kokoa.
09 / 07 / 2020 amin'ny 17: 04
Tsara ny feo ary azo antoka fa tsara kokoa, haha. Misaotra amin'ny fandraisana anjara. fiarahabana
09 / 07 / 2020 amin'ny 17: 33
Tiako koa izy ireo, fa ny sakafoko dia misakana ahy, ary efa 1 taona mahery aho no tsy nihinana sakafo nendasina. ???? Misy soso-kevitra momba ny fryer tsy misy menaka? MISAOTRA
09 / 07 / 2020 amin'ny 17: 38
Salama Ana. Manana safidy maro azo isafidianana ianao amin'ny Internet. Raha tsara ny teti-bola dia manoro hevitra an'i Tefal izahay ary raha toa ny princess na moulinex tery kokoa amin'ny drawer sy cecotec miaraka amin'ny paddle manetsika sy ny endri-javatra hafa. fiarahabana
09 / 07 / 2020 amin'ny 17: 51
Tefal sa COSORI?
09 / 07 / 2020 amin'ny 20: 58
Ny Cosori dia manana vokatra tsara ary safidy tsara kokoa raha tianao ny modely amin'ny drawer. Ny olana dia tsy misy Sat amin'izao fotoana izao any Espaina. Safidy tsara ihany koa ny Tristar, izay anisan'ny vondrona mitovy amin'ny Princess, avy any Holandy. fiarahabana
18 / 07 / 2020 amin'ny 21: 49
Ny sakafo tiako indrindra atao amin'ny frizera dia ny angisy
13 / 07 / 2020 amin'ny 15: 08
Ny sakafo nendasina tiako indrindra dia frites frantsay.
14 / 07 / 2020 amin'ny 12: 28
Ny sakafo tiako indrindra endasina dia croquettes.
15 / 07 / 2020 amin'ny 20: 10
Ny sakafo tiako indrindra dia ny peratra tongolo sy ny tapa-kazo. Ary koa ny akoho nuggets.
Tiako ny manana fryer lalina toy izany mba hahandro sakafo mahasalama sy mora kokoa.
Clara ny Heras
16 / 07 / 2020 amin'ny 09: 01
Ny endasina ankafiziko indrindra dia ny fritters
17 / 07 / 2020 amin'ny 11: 04
Tehina akoho misy zava-manitra. Ary voankazo maina. Namaky fanapotehana rivotra aho izay afaka manana an'io fiasa io
20 / 07 / 2020 amin'ny 00: 10
Tiako ny mahandro akoho sy poti-tsakafo mahasalama!
11 / 08 / 2020 amin'ny 13: 34
Ny nendasina ankafiziko indrindra dia legioma ao anaty tempura.
20 / 07 / 2020 amin'ny 11: 46
Ny sakafo tiako indrindra amin'ny endasina dia ny akoho ary indrindra ny elatra.
20 / 07 / 2020 amin'ny 11: 57
Misy chopitos na dantelina sasany.
30 / 07 / 2020 amin'ny 19: 36
Tsy ho sasatry ny mihinana tequeños matsiro feno fromazy aho (mahazatra an'i Venezoelà izy ireo ary endasina), raha mahazo ny fryer aho dia manasa anao hihinana azy any an-trano.
31 / 07 / 2020 amin'ny 10: 58
Haha, azo raisina ho kolikoly izany. vintana
20 / 07 / 2020 amin'ny 12: 09
Salama!! Sakafo nendasina tiako indrindra: ovy, sakay padrón, angivy, akoho ampongabendanitra, elatry ny akoho… .. Tiako ny nendasina!
20 / 07 / 2020 amin'ny 21: 28
Ny sakafo tiako indrindra dia ny frites frantsay
23 / 07 / 2020 amin'ny 10: 16
Elatra akoho nendasina miaraka amin'ny fries no sakafo tiako indrindra.
23 / 07 / 2020 amin'ny 16: 08
Mahafinaritra ny amponga akoho.
23 / 07 / 2020 amin'ny 16: 11
Ny ankafiziko indrindra dia ny nono natono, ary ny ovy nendasina nefa tsy alona menaka loatra.
24 / 07 / 2020 amin'ny 18: 16
27 / 07 / 2020 amin'ny 03: 27
Tena matsiro ny french fries sy croquettes ary raha ambony tsy misy matavy dia manankarena kokoa.
29 / 07 / 2020 amin'ny 18: 10
Sarotra ny mifidy izay nendasina ankafiziko, fa ny elatry ny akoho no tena tiako sy be ranony ao anatiny. Ahhhhhhmmmmm
29 / 07 / 2020 amin'ny 18: 43
Ovy nendasina misy atody sy ham, atody sy chorizo, atody sy pudding mainty; andao hisakafo ovysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss…
29 / 07 / 2020 amin'ny 19: 04
Ny croquettes dia kilasy voalohany, matsiro !!!
30 / 07 / 2020 amin'ny 10: 53
Tiako ny elatry ny akoho fryer tsy misy menaka miaraka amin'ny fries. matsiro!!! Tena tsara koa ny akoho misy anana, croquettes, sns. Andeha hojerentsika raha misy vintana ary azoko ny fisarihana, ny ahy dia tsy mandeha tsara ary indray andro dia tsy miasa intsony.
30 / 07 / 2020 amin'ny 10: 54
Eny, mirary soa. fiarahabana
30 / 07 / 2020 amin'ny 17: 47
Ny sakafo nendasina tiako indrindra dia ovy nendasina misy atody.
30 / 07 / 2020 amin'ny 14: 13
Eny, ho ahy ny fryer crest volafotsy dia rendrarendra amin'ny vidiny tsara
Ny namako dia manana izany ary tiako izany
30 / 07 / 2020 amin'ny 14: 18
Ny modely farany dia tena feno, ny olana dia ny fahafaha-manao satria mivarotra avy hatrany. Ao amin'ny tranonkala dia manana safidy tsara kokoa na tsara kokoa izahay, ary na dia modely mitovy tanteraka aza. Mirary soa amin'ny fividianana.
30 / 07 / 2020 amin'ny 16: 44
Ny sakafo tiako indrindra… taolan-tehezana BBQ sy quesadillas?
30 / 07 / 2020 amin'ny 16: 58
Tena matsiro fa tsy nendasina, haha. Vintana
FINOANA TANY SABOTRA
30 / 07 / 2020 amin'ny 17: 09
Salama, tiako ny ham sy ny atody, yum yum
30 / 07 / 2020 amin'ny 17: 39
30 / 07 / 2020 amin'ny 17: 41
Milanesas misy poivre nendasina sy ovy no sakafo nendasina tiako indrindra.
30 / 07 / 2020 amin'ny 17: 42
Ny omelette ovy misy akoho nendasina, matsiro! Ary indrindra amin'ny fahavaratra mba haka picnic.
30 / 07 / 2020 amin'ny 22: 05
Salama daholo. Ny sakafo tiako indrindra dia ny skewers. Amin'ity tranga ity dia azoko antoka fa tiako ny zucchini sy ny aubergine satria vokatra roa nohaninay mivady matetika.
Nividy ny fryer aho androany maraina, nifoha maraina ary nilahatra. Raha mandeha adiny iray aty aoriana ianao dia tsy misy na dia iray aza...
Fiarahabana am-pitiavana. Robert
30 / 07 / 2020 amin'ny 22: 51
Ny sakafo tiako indrindra dia longaniza misy poivre sy frites frantsay.
30 / 07 / 2020 amin'ny 23: 57
ny sakafo ankafiziko tsy misy isalasalana… ny french fries….
31 / 07 / 2020 amin'ny 10: 24
salmon tiako indrindra miaraka amin'ny frites
01 / 08 / 2020 amin'ny 05: 11
Ny sakafo nendasina tiako indrindra dia atody, chorizo ​​​​ary frites frantsay. Na dia tsy tokony hohanina matetika aza. ?
01 / 08 / 2020 amin'ny 17: 15
Matetika isika no mihinana akoho ao anaty koba miaraka amin'ny fomba "Pilopi" ary koa ny ovy. Adala ny ankizy ... Fa izahay mivady tsy maintsy mihinana matavy kely XDD Ary vao haingana izahay no nieritreritra ny hividy fryer fa mbola tsy resy lahatra amin'ny fomba fiasan'izy ireo ...
04 / 08 / 2020 amin'ny 08: 57
Ny sakafo tiako indrindra dia ny aubergine nendasina.
04 / 08 / 2020 amin'ny 10: 24
Faly aho, izao dia hanome iray ho an'ny reniko aho, ny fomba tiako indrindra dia ny akoho lava be voasesika araka ny tiako, ary ny mofomamy sponjy voasarimakirana.
04 / 08 / 2020 amin'ny 10: 42
Ny sakafo tiako indrindra dia croquettes, na inona na inona izy ireo. Very ahy izy ireo ...
04 / 08 / 2020 amin'ny 19: 37
Manana roa aho, ny vatasarihana ary ny iray boribory avy any Tefal ary tena faly amin'izy roa aho ary mitady iray hafa ho an'ny tranoko faharoa.
05 / 08 / 2020 amin'ny 00: 06
Ny sakafo nendasina tiako indrindra dia calamari a la Romana.
05 / 08 / 2020 amin'ny 04: 56
Nuggets Akoho ankafiziko
05 / 08 / 2020 amin'ny 23: 52
Ny sakafo tiako indrindra dia ny frites frantsay misy poivre.
07 / 08 / 2020 amin'ny 12: 06
Mazava ho azy ary tsy isalasalana ... ny croquettes.
08 / 08 / 2020 amin'ny 09: 08
Ny croquettes sy ny trondro dia mivoaka tsara. Misoroka menaka ianao. Ary ny biscuit koa dia mivoaka tsara. Fa ny fahotana mba haka kely.
08 / 08 / 2020 amin'ny 10: 33
Ny sakafo tiako indrindra dia akoho tongolo gasy, frites frantsay ary aubergine.
08 / 08 / 2020 amin'ny 12: 13
Ny sakafo tiako indrindra dia ny akoho endasina be
08 / 08 / 2020 amin'ny 14: 51
Ny recette tiako indrindra dia tena tsotra: frites frantsay !!
MONICA PASCUAL MANKALAZA IZANY
08 / 08 / 2020 amin'ny 20: 15
ny sakafo ankafiziko tsy isalasalana dia ny akoho fa matsiro !!
08 / 08 / 2020 amin'ny 22: 41
Ny sakafo tiako indrindra dia ny croquettes ataon'ny renibeko
08 / 08 / 2020 amin'ny 23: 17
Tiako ny hanandrana ny makamba miaraka amin'ny gabardine, ny angisy a la romana, ny angioma voatoto, ary…. Hahafinaritra ve ny mihinana an'ireny nefa tsy mieritreritra hoe inona no hahatavy ahy?
09 / 08 / 2020 amin'ny 00: 01
Ny endasina tiako indrindra dia ny elatry ny akoho misy fries.
09 / 08 / 2020 amin'ny 01: 03
Ny tena tiako atao dia ny elatry ny akoho misy poivre nendasina fa matsiro !!!
10 / 08 / 2020 amin'ny 17: 15
10 / 08 / 2020 amin'ny 18: 27
Salama, ampondra akoho no sakafo tiako indrindra.
10 / 08 / 2020 amin'ny 18: 34
NUGGET MISY FRANTSIKA, sakafo ankafizin'ny devoly keliko roa
11 / 08 / 2020 amin'ny 12: 26
Ny french fries tsy misy menaka, tena matsiro ary tena kely matavy !!!!!
11 / 08 / 2020 amin'ny 15: 23
Ny sakafo tiako indrindra:
Akoho mofo sy french fries.
11 / 08 / 2020 amin'ny 15: 24
11 / 08 / 2020 amin'ny 18: 47
Ny fomba fahandro tiako indrindra dia ny legioma crispy, ny tsindrin-tsakafo maina ary, mazava ho azy, ny frites bacon fromazy izay DIVINE.
12 / 08 / 2020 amin'ny 09: 57
Ny nendasina tiako indrindra dia ny ovy; fa ny ovy tsy misy menaka fa crunch!
12 / 08 / 2020 amin'ny 16: 57
Ny sakafo tiako indrindra dia ny frites sy ny elatra frantsay, tiako izany
12 / 08 / 2020 amin'ny 17: 27
Tiako ny ovy sy ny croquettes
12 / 08 / 2020 amin'ny 18: 05
Ny sakafo ankafiziko indrindra dia saosisy nendasina voatetika manify dia marefo sy tsy misy tavy
12 / 08 / 2020 amin'ny 18: 44
Ny sakafoko dia legioma tsy misy menaka sy akoho
12 / 08 / 2020 amin'ny 19: 45
Ny sakafo ankafiziko dia tsy isalasalana fa ny sakafo tsy misy dikany rehetra, noho ny fryer tsy misy menaka dia azonao atao ny mihinana an'io sakafo io amin'ny fomba mahasalama.
12 / 08 / 2020 amin'ny 21: 57
Ny sakafo ankafiziko dia tsy tena original fa io no azonao, frites frantsay, haha. Jereo raha azoko atao maimaim-poana amin'ny fryer tsy misy menaka. fiarahabana
13 / 08 / 2020 amin'ny 12: 06
Ny sakafo tiako indrindra, ny akoho amin'ny saosy kari, miaraka amin'ny ovy sy tongolo.
NY MAHDI DARAOUI
14 / 08 / 2020 amin'ny 21: 06
Tiako ny nuggets homemade.
09 / 01 / 2021 amin'ny 19: 54
lahatsoratra tena tsara, misaotra amin'ny fanampiana !!
Fryers lalina tsy misy menaka
Fryers tsy misy menaka Cyber ​​​​Monday
Copyright 2022 Fandefasana 24h - antoka ofisialy - Fandoavana mora